Ny Shop eny Antanimena sy Ambohipo moa no faha 25 sy 26 tafatsangana farany teto Antananarivo. Ny Shop Akasya izay miorina amin’iny lalana makany amin’ny seranam-piaramanidin’i Mahajanga iny kosa no faha 5 amin’ireo naorina tany amin’ity renivohi-paritany ity. Ny fitsanganan’ireny tranombarotra Telma ireny, hoy ny tomponandraikitra no nanavao hatrany ny fampifandraisana ireo mpanjifan’ity tambazotran-tserasera iray ity. Na teo amin’ny tolotra eo amin’ny antso izany na tambazotra aterineto. Ny internet 4G très haut débit sy ny tolotra M vola koa ao anatin’izany. Mitohy hatrany, hoy ny mpikarakara, ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa amin’ny alalan’ny fihenam-bidy hatrany amin’ny 35% atolony amin’ny lafiny rehetra. Isan’izany ny Smartphone sy ny best sellers F1+4G amin’ny vidiny 139.000 ariary ary ny Telma legend amin’ny vidiny 19.000 ariary.